Samachar Batika || News from Nepal » अचम्म ! जहाँ दुई वटा बिहे नगरे हुन्छ का’रबाही
अचम्म ! जहाँ दुई वटा बिहे नगरे हुन्छ का’रबाही
नेपालमा एकभन्दा बढीसँग विवाह गरे बहु विवाहको मु’द्दा लाग्छ । यदि कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी विवाह गरेको खण्डमा उसलाई पाँच वर्ष जेल र ५० हजारसम्मको ज’रिवाना हुनसक्ने मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेख छ । तर यो नियम नेपालका लागि हो ।
यो मुलुकको नियम नेपालको भन्दा ठिक विपरित छ । हरेक पुरुषले दुईवटा बिहे गर्नुपर्दछ । जहाँ पहिलो बिहेपछि अर्को बिहे नगर्दा उसलाई कानून लाग्छ । दोस्रो बिहे गरेन भने उसलाई उमेर कै’द पनि हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति २६ असार २०७७, शुक्रबार १३:४१